Oovimba base China-Ilungelo laseMelika lokwazi
Ukuphishekela inyaniso kunye nokubonakala kwimpilo yoluntu
IZiko lezeNzululwazi ngezoBomi leHlabathi (i-ILSI) liQela leLobby yeShishini lokuTya
ushicilelo Imeyli isabelo Ukufuna
ezaposwa ngomhla Aprili 19, 2021 by UStacy Malkan
IZiko lezeNzululwazi ngezoBomi leHlabathi (i-ILSI) ngumbutho ongajonganga nzuzo oxhaswa ngemali liqumrhu eliseWashington DC, elinamahluko ali-17 amanyeneyo kwihlabathi liphela. ILSI zichaza Njengeqela eliqhuba "isayensi ukulungiselela uluntu" kwaye "liphucula impilo yoluntu kunye nokuphila kunye nokukhusela okusingqongileyo." Nangona kunjalo, uphando olwenziwe ngabahlohli, intatheli kunye nabaphandi abanomdla kuluntu babonisa ukuba i-ILSI liqela elikhuselayo elikhusele iimfuno zeshishini lokutya, hayi impilo yoluntu.
Iindaba zamva nje
Ngomhla wamashumi amabini anesibhozo ku-Epreli isifundo kwi-Globalisation kunye neMpilo uxwebhu indlela i-ILSI edlala ngayo indima ephambili ekuncedeni ishishini lokutya ukuba lenze imigaqo-nkqubo yezenzululwazi ngokukhuthaza ukwamkelwa kobambiswano lukarhulumente nolwabucala kunye nokuvumela malunga nokungqubana komdla.
ICoca-Cola iqhawule ubudlelwane bayo obude kunye ne-ILSI. Eli nyathelo "libuhlungu kumbutho wokutya onamandla owaziwa ngophando lwayo kunye neenkqubo zalo zeswekile," IBroomberg yabika ngoJanuwari 2021.
I-ILSI incede iNkampani yeCoca-Cola ukuba yenze umgaqo-nkqubo wokutyeba kakhulu e-China, ngokophando lukaSeptemba 2020 kwi Ijenali yezopolitiko, Umgaqo-nkqubo kunye noMthetho nguNjingalwazi waseHarvard uSusan Greenhalgh. “Ngaphantsi kwengxelo kawonke-wonke yesayensi engakhethi cala kwaye akukho mgaqo-nkqubo ubeka uluhlu lweenkampani ezifihliweyo ezisetyenziselwa ukuqhubela phambili iimfuno zabo. Ukusebenza ngala majelo, uCoca Cola uphembelele inzululwazi yase-China kunye nokwenziwa komgaqo-nkqubo kuwo onke amabakala enkqubo yomgaqo-nkqubo, ukusuka ekuyileni le miba kuyilo lomgaqo-nkqubo osemthethweni, ”ligqibe eli phepha.
Amaxwebhu afunyenwe yi-US Right to Know yongeza obunye ubungqina bokuba i-ILSI liqela eliphambili kushishino lokutya. Ngomhla we-Meyi 2020 kufunda kwiSondlo seMpilo kaRhulumente ngokusekwe kumaxwebhu kutyhila "ipateni yomsebenzi apho i-ILSI ifuna ukuxhaphaza ukuthembeka kwezazinzulu kunye nezifundiswa ukomeleza izikhundla zeshishini kunye nokukhuthaza umxholo osekwe kwimizi-mveliso kwiintlanganiso zawo, ijenali, kunye neminye imisebenzi." Jonga ukogquma kwi-BMJ, Icandelo lokutya kunye nokusela lifuna ukuphembelela oososayensi kunye nabahlohli, ii-imeyile zibonisa (5.22.20)
Uxanduva lweshishini Ingxelo ka-Epreli 2020 Ivavanya indlela amashishini okutya kunye neziselo athe anika ngayo i-ILSI ukungena kwiKomiti yeNgcebiso ngeZikhokelo Zezokutya e-US, kunye nenkqubela yokukhubazeka kumgaqo-nkqubo wezondlo kwihlabathi liphela. Jonga ingxelo kwi-BMJ, Ukutya kunye nomzi mveliso wesiselo esinxilisayo kunempembelelo enkulu kwizikhokelo zokutya zaseMelika, ingxelo ithi (4.24.20)
Uphando lweNew York Times ngu-Andrew Jacobs utyhila ukuba itrasti ye-ILSI exhaswa ngumzi-mveliso icebise urhulumente wase-Indiya ukuba aqhubeke neelebheli zokulumkisa ngokutya okungenampilo. Ixesha ichaze i-ILSI njenge "shishini leqela elinemveliso" kwaye "lelona qela linamandla lokutya ongazange uve ngalo." (9.16.19) AmaXesha akhankanya a Isifundo sikaJuni kuHlabathi lwehlabathi kunye neMpilo ibhalwe ngu-Gary Ruskin wase-US kwiLungelo lokuKwazi ukunika ingxelo yokuba i-ILSI isebenza njengengalo yokubambela abaxhasi bayo bokutya kunye neyeza lokubulala izitshabalalisi.
The INew York Times ityhile ubudlelwane obungachazwanga be-ILSI bukaBradley C. Johnston, umbhali-mbhali wezifundo ezintlanu zamva nje ezithi inyama ebomvu neyenziweyo azibeki ngxaki zempilo. UJohnston wasebenzisa iindlela ezifanayo kwisifundo esixhaswa ngemali yi-ILSI ukubanga iswekile ayisiyongxaki. (10.4.19)
I-blog yezopolitiko zikaMarion Nestle, I-ILSI: imibala yokwenyani ityhiliwe (10.3.19)
Izibophelelo ze-ILSI kwiCoca-Cola
I-ILSI yasekwa ngo-1978 ngu-Alex Malaspina, owayesakuba ngusekela Mongameli kwiCoca-Cola owayesebenzela iCoke ukusukela ngo-1969-2001. ICoca-Cola igcine ubudlelwane obusondeleyo ne-ILSI. UMichael Ernest Knowles, i-Voca yeCoca-Cola yemicimbi yezenzululwazi kunye nemicimbi yezolawulo ukusukela ngo-2008-2013, wayengumongameli we-ILSI ukusukela ngo-2009-2011. In 2015, Umongameli we-ILSI yayinguRhona Applebaum, ngubani uthathe umhlala-phantsi emsebenzini wakhe njengegosa eliyintloko lezempilo kunye nesayensi likaCoca-Cola (kwaye ukusuka ILSI) ngo-2015 emva ENew York Times kwaye I-Press Associated uxele ukuba uCoke uxhase ngemali i-Global Energy Balance Network ukunceda ukutshintsha ityala lokutyeba kakhulu kude neziselo ezineswekile.
Inkxaso mali yeziko
ILSI ixhaswe ngemali yiyo amalungu eenkampani kunye nabaxhasi beenkampani, kubandakanya ukutya okukhokelayo kunye neenkampani zamachiza. I-ILSI iyavuma ukuba ifumana inkxaso-mali kumzi mveliso kodwa ayichazi esidlangalaleni ukuba ngubani onikelayo okanye unegalelo elingakanani. Uphando lwethu lutyhila:
Imirhumo yequmrhu kwi-ILSI Global efikelela kwi-2.4 yezigidi zeerandi ngo-2012. Oku kubandakanya i- $ 528,500 evela kwi-CropLife International, igalelo lama- $ 500,000 elivela eMonsanto nase- $ 163,500 lisuka eCoca-Cola.
A Uyilo lwerhafu ye-ILSI yowama-2013 ibonisa ukuba i-ILSI ifumene i- $ 337,000 evela kwiCoca-Cola nangaphezulu kwe- $ 100,000 nganye eMonsanto, eSyngenta, eDow Agrisciences, Pioneer Hi-Bred, Bayer CropScience kunye ne-BASF.
A Uyilo lwerhafu ye-2016 ILSI eMntla Melika ibonisa igalelo le- $ 317,827 elivela kwaPepsiCo, igalelo elingaphezulu kweedola ezingama-200,000 ukusuka eMars, eCoca-Cola, naseMondelez, kunye negalelo elingaphezulu kwe- $ 100,000 kwiGeneral Mills, Nestle, Kellogg, Hershey, Kraft, Dr. Pepper, Snapple Group, Starbucks Coffee, Cargill, Uniliver kunye neCampbell Soup.
I-imeyile ibonisa indlela i-ILSI efuna ukuphembelela ngayo umgaqo-nkqubo ukukhuthaza izimvo zeshishini
A Ngomhla we-Meyi ka-2020 kwizifundo zeMpilo kaRhulumente wongeza ubungqina bokuba i-ILSI liqela eliphambili lokutya. Uphononongo, ngokusekwe kumaxwebhu afunyenwe yi-US Right to Know ngokusebenzisa iirekhodi zikarhulumente izicelo, ityhila indlela i-ILSI ekhuthaza ngayo umdla wokutya kunye nemizi-mveliso yezolimo, kubandakanya nendima ye-ILSI ekukhuseleni izithako zokutya ezinempikiswano kunye nokucinezela izimvo ezingathandekiyo kushishino; ukuba iinkampani ezinje ngeCoca-Cola zinokuthi zibeke igalelo kwi-ILSI kwiinkqubo ezithile; kwaye, indlela i-ILSI ebasebenzisa ngayo abafundi kwiziphathamandla zabo kodwa ivumela ishishini elifihliweyo kwimpapasho yabo.
Olu phononongo lukwaveza iinkcukacha ezintsha malunga nokuba zeziphi iinkampani ezixhasa i-ILSI kunye namasebe ayo, kunye namakhulu amawaka eedola kwimirhumo ebhaliweyo evela ekukhokeleni ukutya okungenampilo, isoda kunye neenkampani zamachiza.
Isondlo seMpilo kaRhulumente: Ukutyhala ubuhlakani: ifuthe lokudibana kophando kunye nomgaqo-nkqubo ngokusebenzisa iZiko lezeNzululwazi ngezoBomi leHlabathi, NguSara Steele, uGary Ruskin, uDavid Stuckler (5.17.2020)
IBMJ, Icandelo lokutya kunye nokusela lifuna ukuphembelela oososayensi kunye nabahlohli, ii-imeyile zibonisa, NguGareth Iacobucci
Ilungelo lase-US lokwazi ukukhutshwa kweendaba: I-ILSI liqela eliphambili kushishino lokutya, isifundo esitsha sicebisa
A Iphepha likaJuni 2019 kwi-Globalization kunye neMpilo ibonelela ngemizekelo eliqela yendlela i-ILSI eqhubela phambili ngayo kwimidla yeshishini lokutya, ngakumbi ngokukhuthaza isayensi enobungcali kumzi-mveliso kunye neengxoxo kubenzi bomgaqo-nkqubo. Olu phononongo lusekwe kumaxwebhu afunyenwe lilungelo lase-US lokwazi ngemithetho yeerekhodi zikarhulumente.
Abaphandi baqukumbele ngelithi: “ILSI ifuna ukuphembelela abantu, izikhundla, kunye nomgaqo-nkqubo, kuzwelonke nakumazwe aphesheya, kunye namalungu ayo asebenza njengesixhobo sokukhuthaza umdla wabo kwihlabathi liphela. Uhlalutyo lwethu lwe-ILSI lusebenza njengesilumkiso kwabo bathatha inxaxheba kulawulo lwempilo lwehlabathi ukuba balumke ngamaqela ophando azimeleyo, nokuzilolonga phambi kokuthembela kwizifundo zabo ezixhaswe ngemali kunye / okanye ukuzibandakanya kubudlelwane nala maqela. ”
Ubumbano kunye neMpilo: Ngaba izibonelelo ezixhaswa ngemali ngumzi-mveliso ezikhuthaza izifundo ezikhokelwa ngurhulumente okanye ubungqina besayensi obusekwe kubungqina? Isifundo semeko seZiko lezeNzululwazi ngezoBomi leHlabathi, NguSara Steele, uGary Ruskin, uLejla Sarcevic, uMartin McKee, uDavid Stuckler.
Amaxwebhu athunyelwe kwi-UCSF Uvimba-maxwebhu amaShishini okuTya kwi Ilungelo lase-US lokwazi ingqokelela yamashishini okutya.
ENew York Times: IQela leShishini eliLuhlaza lenza iMilo yomgaqo-nkqubo wokutya kwihlabathi liphelaNgu-Andrew Jacobs (9.16.19)
I-BMJ: IZiko lezeNzululwazi ngezoBomi laMazwe ngaMazwe ligqwetha kwimveliso yokutya neziselo, batsho abaphandi, ngu-Owen Dyer (6.4.19) kunye I-tweet evela kwi-BMJ
UMlondolozi: Iziko lezeNzululwazi elicebise i-EU kunye ne-UN 'ngokwenyani iqela lokuloba'Ngu-Arthur Neslen (6.2.19)
Ilungelo laseMelika lokwazi ukukhutshwa kweendaba: I-ILSI liqela lokulungiselela ukutya elingelilo iqela lempilo likarhulumente, kufunyaniswa isifundo (6.2.19)
El Poder del Consumidor ukukhutshwa kweendaba: Kuvele uphando lwamacandelo okwenziwa kwamaziko eprotein los incereses de Coca-Cola contra las políticas de salud pública (6.3.19)
EcoWatch: Iqela lesayensi elinempembelelo elivezwe njengeqela lokulungiselela ukutya, nguStacy Malkan (6.7.19)
I-ILSI ijongele phantsi umlo wokutyeba e-China
NgoJanuwari 2019, amaphepha amabini ngo UNjingalwazi waseHarvard uSusan Greenhalgh ityhile impembelelo enamandla ye-ILSI kurhulumente wase-China kwimicimbi enxulumene nokukhuluphala. Amaphepha abonisa indlela iCoca-Cola kunye neminye imibutho esebenza ngayo kwisebe lase China le-ILSI ukuphembelela amashumi eminyaka yesayensi yaseTshayina kunye nomgaqo-nkqubo woluntu malunga nokutyeba kakhulu kunye nezifo ezinxulumene nokutya ezinje ngohlobo lweswekile 2 kunye noxinzelelo lwegazi. Funda amaphepha:
Ukwenza iChina ikhuseleke kwiCoke: Uyenza njani i-Coca-Cola yesayensi yokukhuluphala kunye nomgaqo-nkqubo e-China, NguSusan Greenhalgh, iBMJ (ngoJanuwari 2019)
Umzi mveliso weSoda uchaphazela isayensi nokutyeba kakhulu e-China, NguSusan Greenhalgh, Ijenali yoMgaqo-nkqubo wezeMpilo yoLuntu (ngoJanuwari 2019)
I-ILSI ibekwe kakuhle e-China kangangokuba isebenza ngaphakathi kwiziko likarhulumente loLawulo lweZifo noThintelo eBeijing.
Amaphepha kaNjingalwazi Geenhalgh abonisa indlela iCoca-Cola nezinye izigebenga zaseNtshona zokutya neziselo “zanceda ekubumbeni amashumi eminyaka yesayensi yase-China kunye nomgaqo-nkqubo woluntu malunga nokutyeba kakhulu kunye nezifo ezinxulumene nokutya” ngokusebenza nge-ILSI ukutyala amagosa aphambili eTshayina "kumzamo wokuthintela intshukumo ekhulayo yokulawulwa kokutya kunye neerhafu zesoda ebezitshayela entshona, ”ingxelo yeNew York Times.
ZiyiChummy njani izigebenga zokutya okungenamsoco kunye namagosa ezempilo eTshayina? Babelana ngeeOfisi, NguAndrew Jacobs, ENew York Times (1.9.19)
U kufunda: I-Coca-Cola yenze iinzame zase China zokulwa ukutyeba, NguJonathan Lambert, NPR (1.10.19)
Amandla afihliweyo eenkampani: Isifundo esivela e-ChinaNguMartin McKee, uSara Steele, uDavid Stuckler, uBMJ (1.9.19)
Ukutya okukujongela phantsi umlo wokutyeba kakhulu, utsho umphengululi, nguCandace Choi, Iphepha elidityanisiweyo (1.10.19)
Uphando olongezelelweyo kwezemfundo oluvela e-US Right to Know malunga ne-ILSI
Iinkampani zokutya zibuchaphazela njani ubungqina kunye noluvo-ngqo ukusuka emlonyeni wehasheNgu-Gary Sacks, ngu-Boyd Swinburn, ngu-Adrian Cameron, ngu-Gary Ruskin.
Ukukhutshwa kweendaba ze-USRTK: Ishishini lokutya liyibona njani inzululwazi, impilo yoluntu kunye nemibutho yezonyango (9.13.17)
Ukudibana esidlangalaleni ngoBucala: Incoko phakathi kweCoca-Cola kunye neCDC, Nason Maani Hessari, Gary Ruskin, Martin McKee, David Stucker, Milbank Ngekota (1.29.19)
Ukukhutshwa kweendaba ze-USRTK: Isifundo sibonisa iinzame zikaCoca-Cola zokuphembelela i-CDC yokutya kunye nokutya kakhulu (1.29.19)
Ugcino lwamaxwebhu oShishino lwecuba lwe-UCSF luphelile Amaxwebhu angama-6,800 aphathelele kwi-ILSI.
Isifundo seswekile ye-ILSI “kanye kwincwadi yokudlala yecuba”
Iingcali zempilo yoluntu zigxeka inkxaso-mali ye-ILSI isifundo seswekile epapashwe kwiphephancwadi lezonyango elidumileyo ngo-2016 oko "kwakuyingozi yokuhlaselwa kweengcebiso zezempilo zehlabathi zokutya iswekile encinci," uxele uAnahad O'Connor kwiThe New York Times. Isifundo esixhaswe ngemali yi-ILSI sathi izilumkiso zokusika iswekile zisekwe kubungqina obubuthathaka kwaye azinakuthenjwa.
Ibali leThe Times licaphule uMarion Nestle, uprofesa kwiYunivesithi yaseNew York ofunda ukungqubana komdla kuphando lwezondlo, kwisifundo se-ILSI: "Oku kuphuma kanye kwincwadi yokudlala yecuba: yenza intandabuzo kwisayensi," utshilo uNestle. “Lo ngumzekelo weklasikhi wendlela inkxaso-mali yemizi-mveliso ekhetha ngayo izimvo. Iintloni. ”
Iinkampani zecuba zisebenzise i-ILSI ukuthintela umgaqo-nkqubo
Ingxelo kaJulayi 2000 yekomiti ezimeleyo yeWorld Health Organisation ichaze iindlela ezininzi apho ishishini lecuba lizame ukujongela phantsi iinzame zolawulo lwecuba ze-WHO, kubandakanya nokusebenzisa amaqela ezenzululwazi ukuphembelela ukwenziwa kwezigqibo ze-WHO kunye nokusebenzisa ingxoxo yenzululwazi malunga nemiphumela yezempilo. yecuba. I-ILSI idlale indima ephambili kwezi nzame, ngokokufunda kwimeko ye-ILSI ehamba nengxelo. "Iziphumo zibonisa ukuba i-ILSI yayisetyenziswa ziinkampani ezithile zecuba ukuthintela imigaqo-nkqubo yokulawula icuba. Abaphathi beofisi abaphezulu kwi-ILSI babandakanyeka ngokuthe ngqo kwezi zenzo, ”ngokophando lwetyala. Bona:
Umzi mveliso wecuba kunye namaqela ezenzululwazi i-ILSI: Isifundo semeko, Iphulo lasimahla le-WHO (ngoFebruwari 2001)
Amacandelo enkampani yecuba yokuCutha ukuSebenza koLawulo lweCuba kuMbutho wezeMpilo weHlabathi, Ingxelo yeKomiti yeeNgcali ngamaXwebhu oShishino lweCuba (ngoJulayi 2000)
Uvimba wamaXwebhu oShishino lweCuba lwe-UCSF une ngaphezulu kwamaxwebhu angama-6,800 aphathelele kwi-ILSI.
Iinkokeli ze-ILSI zincedile ukukhusela i-glyphosate njengezitulo zepaneli ephambili
Ngomhla ka-Meyi 2016, i-ILSI yaqwalaselwa emva kokutyhilwa ukuba usekela-mongameli we-ILSI Yurophu, uNjingalwazi Alan Boobis, wayekwangusihlalo wepaneli ye-UN eyafumana ikhemikhali kaMonsanto glyphosate Kwakungenakwenzeka ukuba ubeke umngcipheko womhlaza ngokutya. Usihlalo we-UN Joint Meeting on Pesticide Residues (JMPR), uNjingalwazi u-Angelo Moretto, wayelilungu lebhodi ye-ILSI ye-Health and Environment Services Institute. Akukho nasinye kwizitulo ze-JMPR ezichaze indima yabo yobunkokeli kwi-ILSI njengengxabano yomdla, ngaphandle kwe igalelo lemali elibalulekileyo elifunyenwe yi-ILSI ukusuka eMonsanto kunye neqela lezorhwebo ngezibulala-zinambuzane. Bona:
Iphaneli ye-UN / WHO kungquzulwano lomqolo wenzala ngaphezulu komngcipheko womhlaza we-glyphosate, UMgcini (5.17.16)
Möglicher Interessenskonflikt bei Pflanzenschutzmittel-Bewertung, I-Die Zeit (5.18.16)
Ungqubano lomdla luxhalabisa intlanganiso yelifu njengoko iingcali zamazwe aphonononge umngcipheko weerbicideI-USRTK (5.12.16)
Ubudlelwane obuluqilima be-ILSI kumaziko ase-US kuLawulo lweZifo noThintelo
NgoJuni 2016, Ilungelo laseMelika lokwazi ingxelo ukuba uGqirha Barbara Bowman, umlawuli wecandelo le-CDC eligwetyelwe ukuthintela isifo sentliziyo kunye ne-stroke, wazama ukunceda umsunguli we-ILSI u-Alex Malaspina ukuba nefuthe kumagosa oMbutho wezeMpilo weHlabathi ukurhoxa kwimigaqo-nkqubo yokunciphisa ukusetyenziswa kweswekile. U-Bowman ucebise abantu kunye namaqela eMalaspina ukuba athethe nawo, kwaye wacela izimvo zakhe kwizishwankathelo zeengxelo ze-CDC, ii-imeyile zibonisa. (UBowman wehla emva kokuba inqaku lethu lokuqala lipapashiwe linika ingxelo ngezi zibophelelo.)
NgoJanuwari 2019 Isifundo kwikota yeMilbank ichaza ii-imeyile eziphambili zeMalaspina ngokudibanisa noGqirha Bowman. Ukufumana ingxelo engaphezulu ngesi sihloko, bona:
I-Coke kunye ne-CDC, ii-icon zeAtlanta, yabelana ngolwalamano oluhle, ii-imeyile zibonisa, ngu-Alan Judd, uMgaqo-siseko weJenali yeAtlanta (2.6.19)
Yintoni eqhubekayo kwiCDC? Imigaqo yokuziphatha yeArhente yezeMpilo ifuna ukujongwa, NguCarey Gillam, iNduli (8.27.2016)
Amaqhina amaninzi eCoca-Cola abonwa ngaphakathi kwamaziko aseMelika oLawulo lwezifo, NguCarey Gillam, uHuffington Post (8.1.2016)
I-Arhente yokuPhuma ngokusemthethweni kwe-CDC emva koNxibelelwano lweCoca-Cola iza ekuKhanyeni, NguCarey Gillam, uHuffington Post (12.6.2017)
Umzi mveliso woTywala ufumana uMhlobo ngaphakathi kweArhente yezeMpilo yaseMelika, NguCarey Gillam, uHuffington Post (6.28.2016)
I-UCSD Hire i-Coke-Funded UmphandiNguMorgan Cook, kwiSan Diego Union-Tribune (9.29.2016)
Impembelelo ye-ILSI kwiKomiti yeeNgcebiso ngeZikhokelo zokuTya eMelika
A Ingxelo yeqela elingenzi nzuzo Ukuphendula ngoxanduva uxwebhu lokuba i-ILSI inefuthe elinjani kwizikhokelo zokutya zase-US ngokungena kwayo kwiKomiti yeeNgcebiso ngeZikhokelo Zezokutya e-US. Ingxelo ivavanya ukuphazamiseka kwezopolitiko okuxhaphakileyo kokutya kunye neziselo ezinje ngeCoca-Cola, McDonald's, Nestlé, kunye nePepsiCo, kunye nendlela le mibutho eyenze ngayo i-International Life Sciences Institute ukukhubaza inkqubela phambili kumgaqo-nkqubo wesondlo kwihlabathi liphela.
Ubambiswano lwePlanethi engenampilo: Ngaba ishishini elikhulu liphazamisa njani umgaqo-nkqubo wezempilo kunye nesayensi, Ukuphendula ngoShishino (Epreli 2020)
Jonga ingxelo kwi-BMJ, Ukutya kunye nomzi mveliso wesiselo esinxilisayo kunempembelelo enkulu kwizikhokelo zokutya zaseMelika, ingxelo ithi (4.24.20)
Impembelelo ye-ILSI eIndiya
I-New York Times inike ingxelo ngempembelelo ye-ILSI e-India kwinqaku layo elinesihloko esithi, “IQela leShishini eliLuhlaza lenza iMilo yomgaqo-nkqubo wokutya kwihlabathi liphela. "
I-ILSI inonxibelelwano olusondeleyo namanye amagosa aseburhulumenteni eIndiya kwaye, njengase China, i-nonprofit ityhale imiyalezo efanayo kunye nezindululo zomgaqo-nkqubo njenge-Coca-Cola -ukudlala indima yeswekile kunye nokutya njengesizathu sokutyeba kakhulu, kunye nokukhuthaza ukwanda kwemisebenzi yomzimba njengesisombululo , ngokweZiko leZibonelelo zaseIndiya.
Amalungu ebhodi ye-ILSI yase-India ibandakanya umphathi we-Coca-Cola wase-India kwimicimbi yezolawulo kunye nabameli abavela eNestlé nase-Ajinomoto, inkampani eyongeza ukutya, kunye namagosa aseburhulumenteni asebenza kwiiphaneli zesayensi ezinikwe uxanduva lokuthatha isigqibo malunga nemicimbi yokhuseleko lokutya.
Ukuxhalaba okude malunga ne-ILSI
I-ILSI inyanzelisa ukuba ayilo qela lokungenelela kushishino, kodwa inkxalabo kunye nezikhalazo zihlala ixesha elide malunga neqela elixhasa ushishino kunye nokungqubana komdla phakathi kweenkokheli zombutho. Jonga, umzekelo:
Ukuphelisa iimpembelelo zeshishini lokutya, Amayeza endalo (2019)
Iarhente yokutya iyalikhaba ibango lembambano. Kodwa izityholo zeshishini lokuthengisa zinokungcolisa igama lomzimba waseYurophuIndalo (2010)
Ukutya Okukhulu Vs. UTim Noakes: Umlo wokugqibela woMnqamlezo, Gcina ukuLungela iMilo, nguRuss Greene (1.5.17)
Ukutya okwenene xa kuvavanywa, NguGqirha Tim Noakes kunye noMarika Sboros (uColumbus Publishing 2019). Le ncwadi ichaza “ukutshutshiswa nokutshutshiswa okungazange kubonwe nguNjingalwazi uTim Noakes, isazinzulu esaziwayo nogqirha, kwityala leerandi elingaphaya kweminyaka emine. Yonke itweet enye inika uluvo malunga nesondlo. ”
Umsebenzi wezifundo, Ukutya kwengqondo, Izifo ezinxulumene nokutya, Uphando lwethu, Pesticides, Abangcamli Ajinomoto, UAlan Boobis, UAlex Malaspina, Angelo Moretto, UBarbara Bowman, I-BASF, Bayer, UBradley C. Johnston, CDC, Isiko soLawulo lweZifo kunye nokuKhusela, iTshayina, Coca Cola, ukugqubana kwemidla, Ukuphendula ngoShishino, Inkxaso mali, Dow, Inethiwekhi yokuSebenza kweMandla yeHlabathi, glyphosate, ILSI, IZiko lezeNzululwazi ngezoBomi leHlabathi, I-JMPR, Intlanganiso edibeneyo yeeNdawo zokuBulala izitshabalalisi, UMarion Nestle, UMichael Ernest Knowles, IMonsanto, Nestle, Uvulindlela wazalwa, URhona Applebaum, Yisonge yonke, ISyngenta, icuba, IKomiti yeeNgcebiso ngeZikhokelo zokutya eMelika, World Health Organization
Izazinzulu zaseTshayina zazifuna ukutshintsha igama le-coronavirus ebulalayo ukuyisusa e-China
ezaposwa ngomhla Februwari 17, 2021 by USainath Suryanarayanan
Kwiintsuku zokuqala zobhubhane we-COVID-19, iqela lezazinzulu elidibene norhulumente wase-China lazama ukumisa kude i-coronavirus e-China ngokuphembelela ukubizwa kwayo ngokusemthethweni. Ukuqinisekisa ukuba intsholongwane yafunyanwa okokuqala eWuhan, China, izazinzulu zathi boyika ukuba intsholongwane izakubizwa ngokuba yi "Wuhan coronavirus" okanye "Wuhan pneumonia," ii-imeyile ezifunyenweyo ngu-US ilungelo lokwazi umboniso.
Ii-imeyile zityhila kwangaphambili kwimfazwe yolwazi eqhutywa ngurhulumente wase-China ukuyila ibali malunga nemvelaphi yenoveli coronavirus.
Ukuthiwa kwale ntsholongwane "yinto ebaluleke kakhulu kubantu baseTshayina" kunye nezalathiso zentsholongwane ekhankanya uWuhan "ukubekwa amabala kunye nokuthuka" abahlali baseWuhan, imbalelwano esuka kuFebruwari 2020 ithi.
Ngokukodwa izazinzulu zaseTshayina zathi igama lobuchwephesha elinikezelwe intsholongwane- "isifo esiqatha sokuphefumla isifo coronavirus 2 (SARS-CoV-2)" - kwakungekho nje "kunzima ukuyikhumbula okanye ukuyibona" ​​kodwa "yayilahlekisa ngokwenyani" kuba yayihambelana intsholongwane entsha kuqhambuko lukaSARS-CoV lowama-2003 olwavela eChina.
Le ntsholongwane yathiywa liQela loFundo lweCoronavirus (CSG) leKomiti yeHlabathi yeRhafu yeTholongwane (ICTV).
Iziko lase-Wuhan leVirology sisazinzulu esiphezulu uZhengli Shi, okhokele ukubizwa kwakhona umzamo, echazwe nge-imeyile kwiYunivesithi yaseNorth Carolina i-virologist uRalph Baric, "ingxoxo eyoyikisayo phakathi kweentsholongwane zaseTshayina" ngegama leSARS-CoV-2.
UDeyin Guo, owayesakuba ngumphathi weSikolo seYunivesithi yaseWuhan seNzululwazi yezoBomi kunye nombhali-mbhali wesindululo sokutshintsha igama, wabhala kumalungu e-CSG athe asilela ukubonisana nesigqibo sawo sokuqamba amagama “neengcali zentsholongwane kubandakanya nezokuqala ukufumanisa [Sic] yentsholongwane kunye nabachazi bokuqala besifo ”abasuka kwilizwe lase China.
“Akufanelekanga ukusebenzisa igama lentsholongwane elisekwe kwisifo elinye (njenge-SARS-CoV) ukubiza zonke ezinye iintsholongwane zendalo ezikulohlobo olunye kodwa ezineempawu ezahlukileyo,” ubhale watsho kwimbalelwano ethunyelwe yena ezinye izazinzulu ezintlanu zamaTshayina.
Iqela licebise elinye igama- “Ukudluliselwa kwe-coronavirus ebuhlungu yokuphefumla (i-TARS-CoV). Olunye ukhetho, bathi, inokuba yi- "Human acute coronavirus (HARS-CoV)."
Umsonto we-imeyile ochaza utshintsho lwegama obhaliweyo wacelwa uSihlalo we-CSG uJohn Ziebuhr.
Imbalelwano ibonisa ukuba uZiebuhr akavumelani nengcinga yeqela laseTshayina. Uphendule ngelithi “igama elithi SARS-CoV-2 linxibelelanisa le ntsholongwane nezinye iintsholongwane (ezibizwa ngokuba zii-SARS-CoVs okanye ii-SARSr-CoVs) koluhlobo kubandakanya nentsholongwane yohlobo lwesi sifo endaweni yesifo esakha sakhuthaza ukubizwa kwale prototype intsholongwane phantse kwiminyaka engama-20 eyadlulayo. Isimamva -2 sisetyenziswa njengesazisi esikhethekileyo kwaye sibonisa ukuba i-SARS-Co V-2 iseyeNYE (kodwa inxulumene ngokusondeleyo) nentsholongwane kolu hlobo. ”
Imithombo yeendaba kaRhulumente yase China CGTN umbiko omnye umzamo Nge-Matshi 2020 ngama-virologist aseTshayina abiza i-SARS-CoV-2 njenge-coronavirus yabantu i-2019 (i-HCoV-19), engakhange idlule kwi-CSG.
Ukuthiya intsholongwane ebangela ubhubhane-uxanduva lwe-World Health Organisation (i-WHO) -kuhlala kuyinto ityala lezopolitiko ukuzivocavoca kuluhlu lwetaxonomic.
Ukuqhambuka kwangaphambili kwefayile ye- Umkhuhlane weH5N1 intsholongwane eyavela e-China, urhulumente wase-China watyhala i-WHO ukuba yenze i-nomenclature engazukubopha amagama e-virus kwiimbali okanye kwiindawo ezivela kuyo.
Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi
Iimeyile zeYunivesithi yaseNorth Carolina uNjingalwazi uRalph Baric, ethi i-US Right to Know ifunyenwe ngesicelo seerekhodi zoluntu, inokufumaneka apha: I-baric imeyile ibatch # 2: iYunivesithi yaseNorth Carolina (Iphepha le-332)
Ilungelo lase-US lokwazi ukuthumela amaxwebhu avela kwizicelo zethu zeerekhodi zoluntu zophando lwethu lwee-biohazards. Bona: Amaxwebhu e-FOI kwimvelaphi ye-SARS-CoV-2, iingozi zokufumana umsebenzi kunye neelebhu zokutya.
Iphepha elingasemva kuphando lwase-US lweLungelo lokwazi ngemvelaphi ye-SARS-CoV-2.
IiBiohazards, IBhlogazards Blog iTshayina, I-Covid-19, imvelaphi yeSARS-CoV-2, SARS-selwe-2
Isifundo esitsha sivavanya ifuthe le-Roundup herbicide kwiinyosi zobusi
ezaposwa ngomhla January 25, 2021 by UCarey Gillam
Iqela labaphandi baseTshayina lifumene ubungqina bokuba iimveliso zeherbicide ezisekwe kwintengiso ye-glyphosate ziyingozi kwiinyosi zobusi okanye ngaphantsi kwezingqinisiso ezicetyiswayo.
Kwiphepha elipapashwe kwi Ijenali ye-intanethi Iingxelo zeSayensi, Abaphandi abazimanya ne-Chinese Academy of Agricultural Sciences eBeijing kunye ne-Chinese Bureau of Landscape and Forestry, bathi bafumene uluhlu lweempembelelo ezingalunganga kwiinyosi zobusi xa beveza iinyosi kwi-Roundup - a glyphosateImveliso esekwe kuthengiswa ngumnini weMonsanto uBayer AG.
Inkumbulo yeenyosi zeenyosi "yayonakele kakhulu emva kokuvezwa yiRoundup" iphakamisa ukuba ukubonakaliswa okungapheliyo kweenyosi kumachiza okubulala ukhula "kunokuba nefuthe elibi ekufuneni nasekuqokeleleni izixhobo kunye nokulungelelaniswa kwemisebenzi yokutya" ziinyosi, abaphandi bathi .
Kananjalo, "amandla okunyuka kweenyosi zeenyosi anciphile kakhulu emva konyango kunye noxinzelelo lweRoundup," bafumanisa abaphandi.
Abaphandi bathi sikhona isidingo “senkqubo yokutshiza isilumkiso sokutshabalalisa ukhula kwangethuba” kwiindawo ezisemaphandleni e-China kuba abagcini nyosi kulezo ndawo “bahlala bengaziswanga phambi kokuba kutshizwe iherbicides” kwaye “neziganeko zetyhefu rhoqo yeenyosi zobusi” zenzeka.
Ukuveliswa kwezityalo ezininzi ezibalulekileyo zokutya kuxhomekeke kwiinyosi zobusi kunye neenyosi zasendle ukuze kufuduswe umungu, kwaye kuphawulwe ukwehla kubemi beenyosi baphakamise iinkxalabo kwihlabathi liphela malunga nokhuseleko lokutya.
Iphepha eliphuma kwiYunivesithi yaseRutgers ipapashwe kwihlobo elidlulileyo ilumkise ngelithi "isivuno sama-apile, iitsheri kunye namaqunube kulo lonke elaseMelika sincitshiswa kukuswela kwezidlulisi."
Pesticides Bayer, iinyosi, iTshayina, Chinese, indawo, EPA, glyphosate, impilo, herbicides, iinyosi, IMonsanto, indalo, inambuzane, utyhefu, lawula, uphando, Yisonge yonke, inzululwazi, Iingxelo zeSayensi
Ilungelo lase-US lokwazi
Bhalisa kwincwadana yethu. Fumana uhlaziyo lweveki kwi-inbox.
Idilesi yemeyile Ngenisa idilesi yemeyile yakho